Kukadzi 2021: Izvo zvakanaka, zvakaipa uye zvinonakidza zveMahara Software | Kubva kuLinux
Pazuva rino rekupedzisira raFebruary 2021, tinovimba kuti yedu hombe uye iri kukura nzanga yepasirese yevaverengi nevashanyi yapfuura kusvika nhasi, anofara, akabudirira, ane hutano, akabudirira uye akaropafadzwa nguva, tichinakidzwa neyedu yese nhau dzinodzidzisa uye tekinoroji iyo yatakapa inoenderana neiyo Yemahara Software, Vhura Sosi uye GNU / Linux, kunyanya.
Uye senguva dzose, nhasi mu Blog KubvaLinux tinounza ichi chidiki tiivistelmä, yeimwe yeakanyanya yakaratidza zvinyorwa yemwedzi, ndiko kuti, inhau dzakakodzera kwazvo, dzidziso, emirayiridzo uye nongedzo yenguva ino iriko inopera.
Este Pfupiso yemwedzi, sekuziva kwenyu vazhinji, chinangwa chayo kupa inobatsira zviyo zvishoma zvejecha kune vedu vese vaverengi, kunyanya kune avo vasina kukwanisa kuona, kuverenga nekugovana navo panguva yakakodzera. Asi izvo, nenzira imwecheteyo, ivo vanoda kuramba vachiziva kubudikidza nemabhuku edu ane chekuita ne Yemahara Software, Vhura Sosi uye GNU / Linux, nedzimwe nzvimbo dzine hukama ne nhau dzehunyanzvi.
1 Kukadzi 2021 Pfupiso
1.1.4 Zvimwe zvinokurudzirwa zvakatumirwa muna Kukadzi 2021
1.2.1 Kukadzi 2021 Distros Inosunungurwa
1.2.2 Dzazvino Nhau kubva kuFree Software Foundation (FSF)
1.2.3 Dzazvino Nhau kubva kuO Open Source Initiative (OSI)
Pfupiso ye February 2021
Rust Mutauro: Vagadziri vayo vanozivisa iyo nyowani vhezheni 1.50.0
Dogecoin Wallets: Maitiro ekuisa iyo yepamutemo maWallets paGNU / Linux?
Ma greats maviri akagadzirira kutarisana uye mubairo idata redu
Dedicated server: zvakanakira bhizinesi rako
Zvimwe zvinokurudzirwa zvinyorwa kubva February 2021
Ethical Kubiridzira: Mahara uye akavhurika maficha eGNU / Linux Distro yako. (Ver)
Rexuiz, Trepidaton uye Smokin 'Pfuti: 3 Mamwe FPS Mitambo yeGNU / Linux. (Ver)
GAFAM Yakavhurwa Sosi: Technological Giants inofarira Open Open. (Ver)
Dogecoin Slumps, Falls 23% Sezvo Elon Musk Anotsoropodza DOGE Chinyorwa. (Ver)
Pluto TV: ichatanga kuratidzwa mashanu emahara emahara. (Ver)
Kurwisa kwekuvimbika kunotendera kuitiswa kodhi paPayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber uye mamwe makambani makumi matatu. (Ver)
Kukadzi 2021 Distros Inosunungurwa
YemaharaBSD 13.0-BETA3: 2021-02-21
Kubvongodza 21.1.0: 2021-02-15
YemaharaBSD 13.0-BETA2: 2021-02-13
EdzaOS 2021.02.03: 2021-02-03
Kuti uwane zvimwe nezve chimwe nechimwe chaburitswa ichi, tinya pane zvinotevera link.
Dzazvino Nhau kubva kuFree Software Foundation (FSF)
03/02/2021 - Maita basa nerutsigiro rwenyu apo isu tinosimudzira rusununguko: Liye Mahara Software Foundation (FSF) yakagumisa zviri pamutemo nhengo dzegore dzese muna Ndira 18, iine mazana makumi mana nenomwe emakumi mashanu emitezo mitsva yaitarisira kuwana. Nekudaro, ivo vakaenderera mberi nekugamuchira mitezo mitsva kusaina-kumusoro mune tsamba. Saka ivo vanofunga kunge vasvika pachinangwa chavo chemamiriri mazana mashanu. Uye nekuda kwechikonzero ichocho, ivo vanotarisira kuramba vachichengeta yakasimba nzvimbo yekuita basa ravo mu487. (Ver)
10/20/2021 - Pemberera Mahara Software Zuva muna Kukadzi 14 nekugara wakabatana: Tichifunga kuti zvishandiso zvekutaurirana zvine hunyanzvi zvinopihwa neFree Software, Open Source uye GNU / Linux hazviuye nezvisungo, ndiko kuti, chipo chakapusa uye chakakwana, chakagovaniswa nekuzvipira kwakazara kwerupo uye kuremekedza; Iyo Yemahara Software Foundation Europe (FSFE) yakasarudza iyo theme ye 'kugara yakabatana' kune yayo Mahara Software Rudo Zuva kupemberera, kunoitika gore rega muna Kukadzi 14, Zuva raValentine, uye isu tinoda! Kuti iwe ugovane rudo! (Ver)
11/02/2021 - LibrePlanet, musangano mukuru weFree Software munyika, wave kusvika: Yemahara Software Foundation inozivisa kuti, pachiitiko chinotevera cheLibrePlanet, mazuva maviri makuru ehurukuro akarongwa, nevatauri vanopfuura makumi mana kubva pasirese, munaKurume 20 na21, 2021, ndosaka vachida rubatsiro rweVazvipiri se pane basa rakawanda rinofanirwa kuitwa uye kuzvipira kutora chikamu kunoramba kwakakosha pakubudirira kwechiitiko. Ivo vanotaura kuti kune maviri makuru mabasa avanofanira kufukidza neVazvipiri uye aya ndeaya: Makamuri Monitors uye IRC Moderators uye Voice Chat. (Ver)
Dzazvino Nhau kubva kuO Open Source Initiative (OSI)
01/02/2021 - Iyo OSI neshamwari dzayo mune chaiyo FOSDEM: FOSDEM yakasununguka uye yakavhurwa sosi yemunharaunda chiitiko chakatamira kuInternet mune yayo 21st gore. Chiitiko chegore rino chichava chakati siyanei, asi divi rakanaka nderekuti iwe une sarudzo yekutora chikamu kumba, pasina chikonzero chekufamba. Hurukuro dzegore rino dzese dzakanyorwa kare, uye maspika achave online kupindura mibvunzo mushure mekutanga kutepfenyurwa. Kana iwe uchida kutora chikamu muhurukuro yekurarama, uchafanirwa kujoina musangano panguva chaiyo. (Ver)
04/20/2021 - Iko kushanduka kweOSI senzvimbo yebasa: OSI inozivisa kuti nekuda kwekukura kwayo kukuru mumakore achangopfuura, iri mukugadzirisa zvakare, uko inotsvaga kuzviona uye kuita sangano senge mamwe marongero uye akaumbwa, ndiko kuti, senzvimbo yakanaka uye ine hutano nzvimbo yebasa, uko vashandi vako vane zviitiko zvezuva nezuva uye vanogona kubudirira vasina kuneta. Saka ivo vanoshuvira kubva kune mumwe-wenguva yakazara munhu kuenda kune vaviri kana kunyange vatatu venguva yakazara-vashandi mumakore mashoma anotevera. (Ver)
09/02/2021 - Kuwedzeredza chirevo chedu chekutumwa: OSI inoshuma kuti vashandisazve chirevo chavo cheumishinari, zvichireva kuti kunyangwe hazvo zvinangwa zvavo zvikuru zvisina kuchinjika, zviitiko zvavo zvenguva yemberi zvino zvichapfuura mvumo yekupa mvumo. Ivo vacharamba vari vatariri veiyo Open Source Tsananguro (Vhura Source Tsananguro - OSD), asi ivo vachatsvaga dzimwe nzira dzekutsigira, kukura nekuchengetedza iyo yakavhurika sosi sosi ecosystem. (Ver)
Semazuva ese, tinotarisira izvi "inobatsira pfupiso" pamwe nezvakaratidzwa mukati nekunze blog «DesdeLinux» yemwedzi wa «Febrero» kubva pagumi nemana, ive yekunakidzwa uye yekushandisa, yeiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve uye zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Kukadzi 2021: Izvo zvakanaka, zvakaipa uye zvinonakidza zveMahara Software